Uyisebenzisa kanjani i-Twitter: Isifundo sichaze inyathelo ngenyathelo | Iindaba zeGajethi
Ngokuqinisekileyo uninzi lwakho ndeva nge-Twitter ngamanye amaxesha. Kusenokwenzeka ukuba bakho kuni abalisebenzisa rhoqo okanye abanye banokuliva nje eli gama ngamanye amaxesha. Emva koko siza kukuxelela yonke into malunga ne-Twitter.
Sikuxelela yintoni, yenzelwa ntoni kwaye kufuneka siyisebenzise njani Ngokufanayo. Ke ngoko, ukuba bekukho abantu abangaziyo ukuba yintoni okanye abazi ukuba ingasetyenziswa njani, la mathandabuzo aya kusonjululwa kulo lonke eli thunyelwe. Ukulungele ukufumana okungakumbi?
1 Yintoni i-Twitter
2 Uyenza njani iakhawunti yeTwitter
3 Ungayisebenzisa njani iTwitter
3.1 Landela iiakhawunti
3.4 Iifoto, iividiyo kunye nee-GIFS
3.5 Imiyalezo yabucala
3.7 Phumelela abalandeli
I-Twitter yinkonzo ye-microblogging eyenziwe ngo-2006 nguJack Dorsey. Ngokuqinisekileyo igama elithi microblogging alithethi lukhulu kuninzi, kodwa singathetha ngenethiwekhi yoluntu. Xa kuziwa kwimidiya yoluntu namhlanje, le yenye yazo. Inethiwekhi esinokuyisebenzisa kwikhompyuter, kwithebhulethi okanye kwiselfowuni. Zonke ziyafumaneka, esinokufikelela kuzo ngeakhawunti enye kwaye ukusebenza kwayo kuyafana.
I-Twitter yaziwa ngokuba yinethiwekhi yoluntu apho inokwabelana ngemiyalezo emifutshane kunye nemifutshane. Kwakukho umda kubalinganiswa abanokusetyenziswa, kule meko yayingama-140. Nangona okwangoku eli nani liphindaphindwe, ukukwazi ngoku sebenzisa oonobumba abangama-280. Ngelixa uluvo lwenethiwekhi luhlala lunye, tshintshiselana ngemiyalezo emifutshane kuyo.
Ixesha elingaphezulu, i-Twitter iye yaba Inethiwekhi yoluntu efuna ukuvelisa incoko okanye ingxoxo-mpikiswano. Isetyenziswa ngabantu abaninzi ukuveza izimvo zabo kwimiba yangoku. Abasebenzisi banokubhala imiyalezo ebhaliweyo, ukongeza ekubeni bakwazi ukufaka iifoto okanye iividiyo kuyo. Sinokulandela abanye abantu, iinkampani okanye imithombo yeendaba ngayo, kuba uninzi luneprofayili kwinethiwekhi.
Ngale ndlela, iTwitter iyi Olona khetho lufanelekileyo kukugcina usesikhathini ukuba kwenzeka ntoni ehlabathini. Uyakwazi ukulandela iindaba, ukongeza ekuvakaliseni uluvo lwakho. Unokubalandela nabahlobo okanye abantu abasondeleyo kwaye wazi ukuba benza ntoni okanye bacinga ntoni. Ngamafutshane, inika ukhetho oluninzi.
Uyenza njani iakhawunti yeTwitter
Inyathelo lokuqala ekufuneka silenzile ukuze sisebenzise inethiwekhi yoluntu kukuvula iakhawunti ngokufanayo. Ukwenza oku, ngenisa nje eyakho iphepha lewebhu. Kulapho inkqubo yobhaliso lwe-akhawunti iqala khona. Uya kubona ukuba ukhetho luyavela kwiscreen esithi irejista, ekufuneka ucofe kuyo ukuqala inkqubo yokudala iakhawunti.
Baza kusibuza kuqala faka igama kunye nenombolo yefowuni. Nangona ukuba awufuni, kunokwenzeka ukuba usebenzise i-imeyile endaweni yenombolo yefowuni. Nje ukuba idatha ingenisiwe, kuya kufuneka ucofe ngokulandelayo. Emva koko, ezinye iinketho ziyavela ezinganiki mdla okanye ezifanelekileyo ngelo xesha, cinezela uqhubeke Ufikelela kwiscreen sokugqibela apho unokuqinisekisa khona ukudala iakhawunti.
Xa sele siyenzile iakhawunti kwi-Twitter, siya kuyenza ube nakho ukumisela imiba eyahlukeneyo yayo. Singongeza ifoto yeprofayile, inkcazo kwiprofayili okanye ubeke ikhonkco kwiwebhusayithi yethu, ukuba ngaba unyusa iwebhusayithi yakho kwinethiwekhi yoluntu. Sinokumisela ukuba sifuna iprofayile yoluntu (apho abantu banokubona esikubhalayo nesikufakayo) okanye eyimfihlo. Ungalawula oku kuseto, ngokunqakraza kwifoto yeprofayile kwaye emva koko ungene kwicandelo labucala nokhuseleko. Kukho icandelo elibizwa ngokuba lukhusela ii-tweets zakho, ezenza ukuba iprofayile yakho ibe yeyabucala.
Nje ukuba senze iprofayili yethu kwinethiwekhi yoluntu, lixesha lokuba uqalise ukuyisebenzisa. Ke ngoko, kukho uthotho lwemiba ekufuneka uyazi ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Twitter ngesiqhelo kwaye ukwazi ukufumana okuninzi kwiakhawunti kwinethiwekhi yoluntu. Sithetha ngayo nganye yezi zinto zodwa.
Enye yezinto esizisebenzisayo kuTwitter kukugcina ulwazi lwezihloko ezithile okanye ukunxibelelana nabanye abantu. Ke ngoko, Sinokulandela iiakhawunti ngokufanayo. Ukwenza oku, sinokusebenzisa ukukhangela kwinethiwekhi yoluntu ukuya kwiprofayile yenkampani, ophakathi okanye umntu osithandayo. Ukongeza, kwiphepha lasekhaya kuhlala kukho iiprofayili ezinokuba nomdla kuthi, kwicala lasekunene lesikrini.
Xa ukwinkangeleko yeakhawunti, uyakubona oko kwinxalenye ephezulu yesikrini ufumana ukhetho lokulandela iakhawunti. Kufuneka ucofe nje kweli qhosha ukulandela le akhawunti. Ngale ndlela, kwiphepha lasekhaya lazo zonke iimpapasho eziza kulayishwa le akhawunti kwi-Twitter ziya kuvela. Ke uya kuhlala unolwazi lwangoku ngezinto abazilayishayo nabazenzayo. Uya kuba nakho ukulandela zonke iiakhawunti ozifunayo. Nangona kwimeko yeakhawunti yabucala, into oyenzayo ukuthumela isicelo kwaye umntu olawula iakhawunti uya kuthatha isigqibo sokuba uyakwamkela okanye hayi.
IiHashtags zisetyenziswa kunye ne- # icon icon. Zisetyenziswa kwi-Twitter rhoqo, ukuthetha ngesihloko esithile. Ngokunokwenzeka kukho izihloko ezikhoyo ngalo mhla. Ke ukuba ufuna ukunika uluvo lwakho, ungasebenzisa loo hashtag. Nangona kuthungelwano lwentlalo zisetyenziselwa yonke into. Umzekelo, ukuba ubukele uthotho okanye umboniso weTV, ungasebenzisa uDisemba njengegama lothotho, imovie okanye uthotho.
Kwi-Twitter, ukusetyenziswa kwe-hashtag kuyinto eqhelekileyo. Uyabona kwiphepha lasekhaya ukuba kukho icandelo labo, elibizwa ngokuba ziindlela. Enkosi ngokufanayo ungabona izihloko zangoku okanye ezithandwa kakhulu kwindawo yakho ngelo xesha. Ke kulula kakhulu ukugcina usesikhathini kwaye ungazibandakanya kwincoko usebenzisa le hashtag sele ikhankanyiwe. I-Twitter iya kukuvumela ukuba ubasebenzisele yonke into, ngokwazisa i icon.
Ewe kunjalo, ukuba uza kusebenzisa i-hashtag, indlela yokwenza yi- #friends. Oko kukuthi, yazisa uphawu lwekhilogram kunye nelizwi. Akukho sithuba phakathi kwe icon kunye negama. Ngaphandle koko ayizukuba yi-hashtag. Zingayindlela yokuhlala unolwazi ngesihloko okanye ubone abantu bethetha ngento oyithandayo nawe. Akukho mda we-hashtag. Ukuba usebenzisa enye esele isetyenzisiwe kwinethiwekhi yoluntu, uza kufumana uluhlu olungezantsi nolo sele lusetyenzisiwe kwaye unokukhetha leyo ufuna ukuyisebenzisa. Ungayibona kwesi sithombe.
Nangona uneakhawunti ye-Twitter apho ufuna ukukhuthaza ishishini lakho, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ezimbalwa. Mhlawumbi uninzi lwabo uninzi. Kuba abantu abafaka imiyalezo besebenzisa ii-hashtag ezininzi bajongwa njengogaxekile kwiimeko ezininzi. Into echaphazela ukuthembeka kwakho.
Ukukhankanywa kuxa sifuna ukubhala umyalezo komnye umntu esidlangalaleni. Ingayimpendulo kwi-tweet umntu ulayishe kwinethiwekhi, okanye sifuna lo mntu abone umyalezo esifuna ukwabelana ngawo. Ukwenza oku, xa ubhala umyalezo kufuneka usebenzise isimboli @ kunye negama laloo mntu okanye iakhawunti.
Njengoko uya kuqaphela, Kwiiprofayili ze-Twitter zichongiwe ngegama lomsebenzisi. Ke ngoko, ukuba ufuna ukukhankanya umntu kumyalezo oza kwabelana ngawo, kuya kufuneka ulandele ipateni enye. Xa ubhala lo myalezo, uya kubona ukuba inethiwekhi yentlalo ihlala ikunika iingcebiso, zamagama ahambelana nonobumba owubhalayo. Kuya kufuneka ukhethe umntu okanye iakhawunti ofuna ukuthumela kuyo lo myalezo.
Iifoto, iividiyo kunye nee-GIFS
Kusenokwenzeka ukuba ngamanye amaxesha uya kufuna ukufaka umyalezo kwinethiwekhi yoluntu usebenzisa ividiyo ethile, ifoto okanye i-GIF. Indlela yokwenza oku ilula kakhulu. Ukusukela ngexesha lokubhala i-tweet ebuzwayo, kwindawo enye apho sibhale khona ukukhankanywa okanye ii-hashtag, siyabona ukuba ii-icon ezininzi ziyavela ezantsi kwebhokisi engenanto.
Kukho i-icon yokufaka ifoto, ukufaka i-GIF okanye ulayishe uvavanyo. Kufuneka nje Cofa kwindawo onomdla kuyo Ukulayisha umxholo onqwenelekayo kuloo myalezo. Uya kuba nakho ukuzilayisha kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni, kuba zongezwa kwigalari. Ke kuya kufuneka ukhethe ifayile ofuna ukuyithumela kuloo mntu.
Ngale ndlela, Ifoto ofuna ukwabelana ngayo nabalandeli bakho iya kulayishwa kwinethiwekhi yoluntu. Ngokubanzi, i-Twitter ikuvumela ukuba ulayishe phantse zonke iintlobo zeefoto, zezona zinethiwekhi zentlalo ziguqukayo malunga noku. Nangona kuhlala kukho iimeko ezithile ngaphandle kokuba akunakwenzeka ukuba zilayishwe. Kodwa kule ndlela, awunakuba nangxaki xa ufaka ifoto kwinethiwekhi yoluntu.
Ukongeza, kunokwenzeka ukuba ngamanye amaxesha uyakubona umsebenzisi elayisha ividiyo ekuthandayo. Ungayikhuphela ngeendlela ezahlukeneyo.
Unokufuna ukubuza umbuzo okanye uthethe nomntu, kodwa ngasese. I-Twitter inika ithuba lokuthumela imiyalezo yabucala, ke unencoko yencoko ekungekho mntu uya kuba nakho ukuyibona. Le yinto elula kakhulu ukufikelela kuyo. Kwiphepha lasekhaya lenethiwekhi yoluntu, uya kubona ukuba phezulu kukho icandelo elibizwa ngokuba yimiyalezo. Kuya kufuneka ucofe kuyo ukuze ungene.
Uya kuthi emva koko ufumane iwindow entsha oza kuqala kuyo incoko. Apho kuya kufuneka uyenzile faka igama lomntu apho ufuna ukuthumela umyalezo wangasese. Sijonga igama kunye noluhlu olubonisiweyo, khetha umntu ofuna ukumbhalela. Kwimiyalezo yabucala ungabhala ngaphandle komda womlinganiso.
Ke xa unayo, hit hit send. Xa loo mntu ephendula kuwe, uya kubona ukuba kwi icon yomyalezo kwi-Twitter, leyo ibonakala phezulu kwiscreen, uya kufumana i-icon ngenani. Oku kuthetha ukuba unomyalezo olindele ukuwufunda. Ngokuqinisekileyo leyo yimpendulo.
Ukuba nangaliphi na ixesha ku-Twitter, ubona umyalezo onomdla kuwe, ungawuthanda. Ngale ndlela, kwiprofayile yakho uya kuba nakho ukubona ezo foto okanye ii-tweets ozithandayo ngalo lonke ixesha. Yindlela yokugcina ezinye ozifumana zinomdla. Iqhosha elifana neli lenziwe njengentliziyo kwaye uhlala ulibona ezantsi kwemiyalezo ekwabelwana ngayo ngamanye amaakhawunti.
Ngale ndlela, ukongeza ekwenzeni kucace kwiprofayili ukuba ulayishe lo mfanekiso okanye i-tweet oyithandayo, igcinwe kwiprofayile yakho. Ukuba nangaliphi na ixesha utshintsha ingqondo, kuya kufuneka ucofe icon yentliziyo kwakhona kwaye awusathandi kuthethwa nge-tweet kwakhona. Yinto elula nje leyo.
Ukuba uneprofayile kuTwitter apho ufuna ukukhuthaza ishishini lakho, iinkonzo zakho okanye ungumculi, okanye unewebhusayithi, kubalulekile ukufumana abalandeli. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukubonakala okukhulu, ukuze ufumane abathengi abaninzi okanye kukho abantu abaninzi abanomdla kwinto oyenzayo. Zininzi iindlela zokwenza oku.
Ngethamsanqa Azinzima kwaye unokufunda ngaphandle kweengxaki. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukufumana abalandeli kwinethiwekhi yoluntu, into eya kuthi incede ishishini lakho ukuba likhule okanye lenze izakhono zakho njengomculi zaziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayisebenzisa njani iTwitter